စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၉) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on February 14, 2014 at 17:20 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
အများထဲမှ အဖြေမှန်ကို ရွေးထုတ်ခြင်း (Multiple Choice)
ရွေးချယ်စရာတွေထဲမှာ ဆင်တူရိုးမှားအဖြေနှစ်ခုပါနေပါက ဒီမေးခွန်းပုံစံမျိုးဟာ လွယ်တယ်လို့ မြင်ရပေမဲ့ ခက်တတ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းပုံစံကို ကောင်းကောင်းဖြေဆိုနိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါအကြံပြုချက်များကို လေ့လာ ကြည့်ပါ။
ရွေးချယ်စရာတွေ (options) အားလုံးကို သေချာစွာ ဖတ်ကြည့်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ပါက သင်သိပြီးသား အကြောင်း အရာတွေကို အသုံးပြုပြီးဖြစ်နိုင်ချေ မရှိသော ရွေးချယ်မှုတွေကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။
သင့်စိတ်ထဲမှာ မှားတယ်လို့ သေချာနေတဲ့ options တွေကို ပယ်လိုက်ပါ။
သင်လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်ပါတဲ့ စာပိုဒ်ရဲ့ အပိုင်းကို ရှာပါ။ ဘယ် option ဟာ မှန်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြတဲ့ အဓိက စာလုံးတွေကို စာပိုဒ်ထဲမှာ ရှာပါ။
Always, never, might, may (သို့) could ကဲ့သို့သော စကားလုံးတွေကို သတိထားပြီး ကြည့်ပါ။ option တစ်ခုဟာ မှန်သလား၊ မှားသလားဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ ၄င်းစာလုံးများက အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။
လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားသော မေးခွန်းများ (Open-ended questions)
ဒီလိုမေးခွန်းပုံစံကို ဖြေဆိုတဲ့အခါ သင့်အရေးအသားကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားရပါမယ်။ အမှတ်များများရဖို့ ဆိုရင် စာလုံးပေါင်းနဲ့ သဒ္ဒါဟာ တိတိကျကျ မှန်ကန်ဖို့ လိုမလိုကို ကြိုတင်စုံစမ်းထားပါ။ စာမေးပွဲရဲ့ ဒီအပိုင်းမှာ လက်ရေး မသေသပ်မှုကြောင့် အမှတ်တွေ လျော့နိုင်ပါတယ်။
မေးခန်းတွေကို သေသေချာချာ ဖတ်ပါ။
မေးခွန်းရဲ့အဖြေပါတဲ့ စာပိုဒ်ရဲ့အပိုင်းကို ရှာပါ။
စာပိုဒ်ထဲက အချက်အလက်ကို ကိုးကားပြီး သင့်အဖြေကို ပြည့်စုံတဲ့ ၀ါကျအဖြစ် ရေးချပါ။
နားလည်လွယ်တဲ့ တိုရှင်းသော ၀ါကျများကိုသာ အသုံးပြုပါ။
အဖြေရေးတဲ့အခါမှာ သင့်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်သက်သက်မဟုတ်ဘဲနှင့် စာပိုဒ်ထဲက အချက်အလက်ကို အမြဲ တမ်းအသုံးပြုပါ။
စာပိုဒ်ထဲကအတိုင်း ကူးမရေးပါနှင့်။ သင့်စကားနှင့်သင် ရေးပါ။ စာပိုဒ်ထဲက ၀ါကျကို အဓိပ္ပါယ်တူညီသော အခြားဝါကျပုံစံဖြင့် ရေးသားပါ။
ပေးထားသော စာပိုဒ်တွေကို အစီအစဉ်ကျအောင် စီစဉ်ခြင်း (Put the paragraphs into the correct order)
စာပိုဒ်တွေကို အစီအစဉ်ကျအောင် ပြန်စီဖို့ဆိုရင် သင်ဟာ စုံထောက်တစ်ယောက်လိုပဲ သင့်ကို အထောက် အကူပြုမဲ့ သဲလွန်စတွေကို ရှာရပါမယ်။ ဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်ဖော်ပြပါ အကြံပြုချက်များကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
အစီအစဉ်အမှန်ကို မဆုံးဖြတ်ခင်ပေးထားသော စာပိုဒ်အားလုံးကို ဖတ်ပါ။
အောက်ပါတို့ကို ဖော်ပြနေသော စကားဆက်များ (linking words) ဆက်စပ်မှုကို ဖော်ပြသော အမှတ် အသားများ (discourse markers)တို့ကို ရှာဖွေပါ။
တူညီသော သဘောထားကို ဖော်ပြသော စကားလုံးများ - ဥပမာ too, also, furthermore, in addition, what’s more….
မတူညီသော သဘောထားကို ဖော်ပြသော အသုံးအနှုန်း however, nevertheless, on the other hand, then again, while, whereas.
အကြောင်းပြချက်နှင့် ရလဒ်ကို ဖော်ပြသော စကားလုံးများ- so, asaresult, consequently, for this reason, since, as, because of this, due to:
အစီအစဉ်ကို ဖော်ပြသော စကားလုံးများ - firstly, first of all, initially, then, secondly, finally, eventually, in the end.
စာပိုဒ်တွေကြား ဆက်စပ်မှုကို ရှာကြည့်ပါ။ ရည်ညွှန်းစကားလုံး (reference words)တွေသည် စာပိုဒ်အရှေ့ပိုင်း မှ အရာတွေကို နောက်ပြန်သွား၍သော်လည်းကောင်း၊ စာပိုဒ်နောက်ပိုင်းမှ အရာတွေကို ရှေ့သို့ ကြို၍သော်လည်း ကောင်း ချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။
ပုံမှန်ရည်ညွှန်းစာလုံးများကတော့ နာမ်စား (pronouns)တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ-
ပုဂ္ဂလနာမ်စားများ (personal pronouns)- I, you, he, she, it
ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနာမ်စားများ (possessive pronouns they) – my, mine your, yours, his, her, hers, its, our, ours, their, theirs.
ညွှန်ပြနာမ်စားများ (demonstrative pronouns) – this, that, these, those
လွတ်နေသော ၀ါကျများ (Missing sentences)
စာပိုဒ်များကို အစီအစဉ်တကျ စီစဉ်ပေးရသလိုပဲ စာပိုဒ်ထဲမှာ လွတ်နေတဲ့ ၀ါကျနေရာမှာ ၀ါကျတွေ ထည့်ပေးဖို့ဆိုရင် စုံထောက်တစ်ယောက်ကဲ့သို့ပင် သဲလွန်စများကို ရှာဖွေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ ဥပမာနှင့် အကြံပြုချက်များကို လေ့လာကြည့်ပါ။
Usually these streets were full of busy people. (လွတ်နေသော ၀ါကျ)
It was completely quiet on the streets outside. Guy thought it was strange. --------------------. Now they were completely empty. The snow that had fallen looked likeacarpet. Outside looked like inside.
ဒီစာပိုဒ်ထဲမှာ လွတ်နေတဲ့ဝါကျသည် ရှေ့ကစာပိုဒ်ကိုလည်း ပြန်လည်ဖော်ညွှန်းပါတယ်။ အညွှန်းစကားလုံး (these streets) ပါနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလွတ်နေတဲ့ဝါကျဟာ နောက်က၀ါကျနဲ့လည်း ချိတ်ဆက်ရှိပါ တယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ လွတ်နေတဲ့ ၀ါကျအရ ပုံမှန်အားဖြင့် အလုပ်များသော လူတွေနဲ့ ပြည့် နှက်နေတဲ့ ဒီလမ်းတွေဟာ “အခုတော့ ၄င်းတို့သည် လုံးဝ လူမရှိပါ” ဆိုတဲ့ နောက်ဝါကျနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ နောက်ဝါကျမှ they ဆိုတဲ့ စကားလုံးကတော့ အများကိန်းနာမ် (plural noun)ဖြစ်တဲ့ the streets ကို ပြန်လည်ဖော် ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။
စာပိုဒ်ထဲကနေ ထုတ်ထားသော ၀ါကျအားလုံးကို ဖတ်ပါ။
စာပိုဒ်ကို ဖတ်ပြီးနောက် သင့်စိတ်ထဲမှာ သေချာပြီလို့ တွေးထားတဲ့ ၀ါကျကို လွတ်နေသော ကွက်လပ်၌ဖြည့် ရေးပါ။
ကွက်လပ်ရဲ့ အရှေ့နှင့်အနောက်၌ရှိသော ၀ါကျများကို သေသေချာချာဖတ်ပါ။ ဒီဝါကျတွေနဲ့ လွတ်နေတဲ့ ၀ါကျကြားမှာ အမြဲပဲ ချိတ်ဆက်ရှိနေပါတယ်။
ဖော်ညွှန်းစကားလုံးတွေကို ရှာပါ။ ၄င်းတို့သည် ဘယ်အရာကို ရည်ညွှန်းနေတာလဲ? ပုံမှန်ရည်ညွှန်းစကားလုံးတွေ ကတော့-
ပုဂ္ဂလနာမ်စားများ (personal pronouns)ဖြစ်တဲ့ - I, you, he, she, it, we, they.
ပိုင်ဆိုင်မှုပြနာမ်စားများ (possessive pronouns)ဖြစ်တဲ့ my, mine, your, yours, his, her, hers, its, their, theirs, our, ours
ညွှန်ပြနာမ်စားများ (demonstrative pronouns)ဖြစ်တဲ့ this, that, these, those တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
In addition, however, asaresult, the - အစရှိတဲ့ ချိတ်ဆက်မှုကို ပြတဲ့ စကားလုံးတွေ (discourse markers) ကို ရှာပါ။
၀ါကျတစ်ခုကို ဘယ်ကွက်လပ်ထဲမှာ ဖြည့်ရမလဲဆိုတာကို မသေချာရင် ၄င်းကို ချန်ခဲ့ပြီး ရှေ့ဆက်သွားပါ။
ကွက်လပ်တစ်ခုတည်းအတွက် အဖြေ(၂)ခု ရှိနေတယ်လို့ထင်ရင် အဖြေ (၂)ခု စလုံးကို ရေးချပြီးနောက်မှ ပြန်စစ်ဆေးပါ။
ကွက်လပ်တစ်ခုအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အဖြေအားလုံးကို ရေးချပါ။ စဖြေကတည်းက ရွေးချယ်မှု မှားသွားရင် နောက်ပိုင်းအဖြေတွေကိုပါ ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
စာပိုဒ်ကို အစဉ်အတိုင်း ဖတ်ရန် မလိုပါ။ ရှေ့ဖတ်လိုက်၊ နောက်ဖတ်လိုက်နဲ့ တခြားစာပိုဒ်တွေကိုလည်း ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
မလိုအပ်တဲ့ အပိုဝါကျတွေလည်း ပါကောင်းပါနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာပိုဒ်နဲ့ လွတ်နေတဲ့ ၀ါကျမှန်တို့ကြားမှာ ချိတ်ဆက်မှုအမြဲရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ မမေ့လိုက်ပါနဲ့။
စာပိုဒ်နှင့် သက်ဆိုင်သော ၀ါကျများကိုပြီးပြည့်စုံအောင် ဖြည့်စွက်ပေးခြင်း (complete the sentences about the text)
စာပိုဒ်နှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ ၀ါကျတွေကို ပြီးပြည့်စုံအောင် ဖြည့်ပေးရတဲ့ မေးခွန်းတွေကတော့ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ သို့သော် ဒီကဏ္ဍမှာ ဖော်ပြသွားမဲ့ အကြံပြုချက်တွေက အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပေးထားတဲ့ နမူနာပုံစံလေးကို လေ့လာပြီးမှ အကြံပြုချက်တွေကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
Read the text and complete the sentences in your own words (စာပိုဒ်ကို ဖတ်ပြီး ၀ါကျတွေကို သင့်စကားနှင့်ပြီးပြည့်စုံအောင် ဖြည့်စွက်ပါ။)
ပေးထားသည့် မပြည့်စုံသော ၀ါကျမှာ
My friend felt frightened when------------------------------------------------.
အဖြေ(Ans;) she first put the spider on top of the television. ပေးထားတဲ့ မပြည့်စုံတဲ့ဝါကျကို ဖော်ညွှန်းတဲ့ အပိုင်းကို စာပိုဒ်ထဲမှာ ရှာပါ။
အဖြေကို ဖြေဆိုရာတွင် သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက် (သို့) အတွေးအေခ်ါများ မဟုတ်ဘဲ စာပိုဒ်ထဲက အချက်အလက်ကို အသုံးပြုပါ။
၀ါကျကို စာပိုဒ်ထဲမှ တိုက်ရိုက်မကူးချပါနှင့်။ ၀ါကျပါစကားလုံးတွေရဲ့ ပုံစံကို ပြောင်းချင်ပြောင်းပေးရပါလိမ့် မယ်။ ဥပမာ-စာပိုဒ်ထဲက နာမ်(noun)ကို အဖြေရေးတဲ့အခါ ကြိယာ (verb)ပုံစံသို့ ပြောင်းပြီး ရေးချင်ရေးရပါ လိမ့်မယ်။
အဖြေကို ဖြည့်စွက်ရာတွင် လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်အားလုံး ပါဝင်အောင် ဖြေဆိုပါ။ သင့်အဖြေမှန်ရဲ့လား။ သဒ္ဒါ၊ စကား အစိတ်အပိုင်းများ (parts of speech)၊ စာလုံးပေါင်းနှင့် ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ် တို့ကို ပြန်လည် စစ်ဆေးပါ။
စာပိုဒ်တစ်ခုထဲက ဝေါဟာရများ(Vocabulary inatext)
တစ်ခါတရံကျတော့ reading exams တွေမှာ ဝေါဟာရသက်သက်ကိုပဲ မေးတဲ့မေးခွန်းပုံစံပါနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမေးခွန်းကို အလွယ်တကူဖြေနိုင်ပြီး အမှတ်ကောင်းကောင်းရနိုင်ဖို့အတွက် အောက်ဖော်ပြချက်လေးတွေကို လေ့လာကြည့်ပါ။
“------------“ လို့ အဓိပ္ပါယ်ရသော စကားလုံးကို စာပိုဒ်ထဲက ရှာပါ။ (အဓိပ္ပါယ်ကို ပေးထားပါတယ်)
“X” စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်အမှန်ကို ရွေးချယ်ပါ။ (ရွေးချယ်စရာ အဓိပ္ပါယ်အချို့ကို ပေးထားပါလိမ့် မယ်)
“X” အဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ပြပါ။ (သင့်စကား နှင့်သင် ရေးပါ။)
၄င်းဝေါဟာရပါသော ၀ါကျနှင့် ၄င်းဝါကျ၏ ရှေ့နှင့်နောက်၌ရှိသော ၀ါကျတွေကိုပါ သေသေချာချာဖတ်ပါ။ စကားစပ်မှ တဆင့် ထိုဝေါဟာရ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
စာပိုဒ်ရဲ့အကြောင်းအရာက ဘာလဲ? ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ဝေါဟာရတို့သည် ဆက်စပ်မှုရှိနေပါသလား?
ထိုဝေါဟာရသည် ဘယ်စကားအမျိုးအစားလဲ? နာမ်(noun)လား? ကြိယာ (verb)လား? နာမ၀ိသေသန (adjective) လား၊ ကြိယာထောက်(adverb)လား?
၄င်းမှာ un-, in-, dis- အစရှိတဲ့ စကားလုံးတွေကို မဟုတ်သဘောဆောင်စေတဲ့ “ရှေ့ဆက်” (prefix) ပါနေသလား။ prefix”re” ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ “ထပ်ခါ” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
၄င်းမှာ - -tion, -sion, -ment အစရှိတဲ့ နာမ်တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ “နောက်ဆက်” (suffix) (သို့) နာမ ၀ိသေသနတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ -ive, -able, -ful အစရှိတဲ့နောက်ဆက်တွေပါသလား?
၄င်းဝေါဟာရသည် သင်သိပြီးသား အခြားဝေါဟာရတစ်ခုခုနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်(similar)ဖြစ်နေပါသလား? ဥပမာ - birth နှင့် birthday
၄င်းဝေါဟာရသည် သင့်ဘာသာစကားထဲက ဝေါဟာရတစ်လုံးလုံးနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် (similar) ဖြစ်နေပါလား? ဥပမာ- circuit သည် စပိန်ဘာသာ (Spanish) မှ “circuito” နှင့် ဆင်ပါသည်။
ထိုစကားလုံးနှင့် အဓိပ္ပါယ်တူသော တခြားစကားလုံး စာပိုဒ်ထဲမှာ ရှိပါသလား? စကားလုံးတွေ မထပ်ရလေ အောင် စာပိုဒ်တွေထဲမှာကြောင်းတူသံကွဲ စကားလုံး (synonyms) တွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်(သို့) အဖြေသည်စာပိုဒ်ထဲရှိ မူရင်းစကားလုံးနှင့် စကားအစိတ် အပိုင်း (part of speech) တူကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
ဝေါဟာရအသစ်တစ်လုံးကို သင်ယူတဲ့အခါမှာ ၄င်း၏ မိသားစုဝင် စကားလုံးတွေကိုပါ ချရေးပါ။ ဥပမာ possible ကို သင်ယူတဲ့အခါ possibility (noun) impossible(prefix), possible(adv) စသည့် စကားလုံးများကိုပါ ရေးချပါ။
စာရေးသူ၏ ထင်မြင်ချက် (သို့) စာဖတ်သူ၏ တုံ့ပြန်မှု (The writer’s) opinion or reader’s response)
အဆင့်မြင့် (higher level) စာမေးပွဲတွေမှာတော့ စာပိုဒ်နှင့်ပတ်သက်၍ စာရေးသူရဲ့အမြင် (သို့) သင့်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကို မေးတတ်ပါတယ်။ အောက်ပါ အကြံပြုချက်တွေကို လေ့လာကြည့်ပါ။
စာပိုဒ်အမျိုးအစားက စာရေးသူ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို နားလည်ရန် အထောက်အကူပြုပါသလား? ဥပမာ- စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လား၊ အကြံပေးတဲ့ လက်ကမ်းစာဆောင်လား? သတင်း အချက်အလက်ပေးတဲ့ အစီရင်ခံစာလား?
စာရေးသူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖော်ပြနေတဲ့ အရေးအသားမျိုးကို စာပိုဒ်ထဲမှာ ရှာပါ။ ဥပမာ “We should use…….” (----------ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုသင့်တယ်။) “Experts warn us that….” (………လို့ ပညာရှင်များက သိပေးပါတယ်။)
စာရေးသူ၏ ထင်မြင်ချက်ကို ဖော်ပြနေတဲ့ အရေးအသားကိုလည်း စာပိုဒ်ထဲမှာ ရှာပါ။ ဥပမာ - In my view….., (ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့……“I refuse to believe that……”…….ကို မယုံကြည်နိုင်ပါဘူး။)
သင့်ထင်မြင်ချက်ကို ဖော်ပြရာ “In my view…….., “I believe……” အစရှိတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို အသုံးပြုပါ။
စာပိုဒ်ထဲပါ အကြောင်းအရာများကို သင့်အနေနဲ့ သဘောတူပါသလား? (သို့) ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို “I agree that……because….” အစရှိသော အသုံးအနှုန်းကို သုံးပြီး သင့်စကားနှင့်သင် ရှင်းပြပါ။
Permalink Reply by esther on February 18, 2014 at 12:04